Iyo yakasviba modhi, iyo "inogara iri" maitiro kana inofambiswa Homebar mune ye iOS 12 pfungwa | IPhone nhau
Chanza chakanaka chevaverengi uye pfungwa dziri kubuda pawebhu nezve iyo nyowani iPhone 8 modhi. Zviripachena, kuve nekugadzirwa kwechigadzirwa kwakapotsa kwasimbiswa zviri pamutemo uye zvakawanda pamusoro pezvinhu zvikuru zveiyi iPhone nyowani senge iyo OLED skrini, kune vazhinji vanosarudza kuita kwavo kududzira uye pfungwa. Mune ino kesi izvo zvatiinazvo patafura ndizvo iyo iOS 12 pfungwa pane inofungidzirwa iPhone Pro, pfungwa inogona kunyatsogadzirwa neApple pachayo.
John Calkins, ndiye muvambi weiyi pfungwa umo matinogona kuona zvinonakidza zvemamiriro erima eiyo iPhone Pro, ine Inoyevedza HomeBar uye iyo inogara iri sarudzo pane izvo zvatakaona mumakwikwi anokwikwidza akadai seSamsung Samsung S8 uye kuti neichi chitsva OLED skrini inogona kusvika kune iyo iPhone, asi kune zvimwe zvinonakidza ruzivo mune ino pfungwa ...
Mune ino kesi iko kufungidzira iOS 12 yakananga mumamiriro erima iyo inopa iyo Apple chishandiso chinoshamisa chimiro. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti rese iri ibasa rakaitwa muPhotoShop naCalkins, hapana nguva yatiri kutarisana neiyo interface yakagadzirwa neApple. Isu tinosiya zvakadzama screenshots yeyiyi pfungwa yeIOS 12:
Notifications pachiratidziro chekumba, HomeBar ine sarudzo yekurembera kumusoro, shandisa mutauri kana kushandisa keypad yenhamba pakati pezvimwe sarudzo. Isu tinoonawo skrini umo matinoona mamiriro ekunze, karenda kana ruzivo rwakafanana parutivi rweinofungidzirwa bhatani repamba iyo ingave zvakare yekubata ID. Tinoona zvimwe zvinonakidza izvo Apple zvaigona kuwedzera mune ramangwana PaIOS, hapana mubvunzo mazano akanaka ekuti avo vanobva kuCupertino vanogona kuchinjika pane imwe nguva asi isu tiri kutaura nezve Apple uye zviripachena iyi ingori pfungwa. Kana iwe uchida kuona zvimwe zvimwe zveizvi iOS 12 pfungwa mune yakajairwa rima maitiro yakagadzirwa naJohn Calkins, unogona kuvawana zvakananga pane iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Yerima modhi, "inogara iri pa" modhi kana inofambiswa Simba repamba mune iri iOS 12 pfungwa
ufffff izvi zvinoitwa nesamsung uye watove nemwenje mumaoko ako…. Ini handitaure zvimwe uye ini ndinozvitaura zvese! ha ha ha ha ha ha
Ini ndinonyatsoda zano, rinonyatso kubudirira uye chokwadi ndechekuti rinonakidza kwazvo.
Pinterest inovandudzwa nekuwedzera pini kune zoom ficha